၂၀၁၇ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၂၁) ရက်နေ့က ပါရီမြို့တွင် « စစ်ပွဲတွင်းမှကလေးများကိုကာကွယ်ကြ » ညီလာခံကို ပြင်သစ်အစိုးရနှင့် UNICEF တို့ပူးပေါင်းပြီး ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ဆက်ဖတ်ရန်
Paris isacandidate city to host the 2024 Olympic and Paralympic Games. The French Ministry of Foreign Affairs and International Development (MAEDI),afounding member of the Paris 2024 public interest group, is working with the entire French diplomatic network abroad to support the bid.ဆက်ဖတ်ရန်
The numerous archaeological sites from all five continents are under threat of armed conflict, looting and degradation by man and the passing of time, as well as natural disasters. In view of this, safeguarding, protecting and securing ever greater knowledge of this universal heritage is essential.ဆက်ဖတ်ရန်
ပြင်သစ်နိုင်ငံသမ္မတသည် ဘယ်(လ်)ဂျီယမ်ပြည်သူလူထု နှင့် လုံးဝ တစိတ်တဝမ်းတည်းရှိနေပါ ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါသည် ။ ပြင်သစ်နိုင်ငံသမ္မတသည် ထိုကဲ့သို့ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာအခြေအနေမျိုးတွင် လိုအပ်နိုင်မည့်အကူအညီ များကိုပေးနိုင်ရန် ဘယ်(လ်)ဂျီယမ်အစိုးရ၏ (...)
လက်ရှိဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ ဒီမိုကရေစီ (...)
ပြင်သစ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာလ (၈) ရက်နေ့တွင်ကျင်းပခဲ့သည့်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြောင့် ဖြစ်ထွန်းလာသည့်လွှတ်တော်သည် ၄င်း၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို စတင်ထမ်းဆောင်လာနိုင်ခြင်းအတွက် ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ (...)
The Ministry of Foreign Affairs and International Development and its operator, Campus France, are launching Immersion France,afree mobile app promoting tourism and language tourism in France for foreign tourists and language learners.ဆက်ဖတ်ရန်
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်သံရုံး ကထောက်ခံသော CFI ၏ အထူးအစီအစဉ် ကို MEDIAS 21 ဟုခေါ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်သံရုံး ကထောက်ခံသော CFI ၏ အထူးအစီအစဉ် ကို MEDIAS 21 ဟုခေါ်ပါသည်။ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်သိမ်းရေး သတင်းပညာ နှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု ဆိုင်ရာကဏ္ဍများ ကို တစ်နှစ်တာ အထူးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသော ဤသင်တန်း အတွက် ဦးဆောင်အယ်ဒီတာတစ်ယောက်၊ ထိပ်တန်း သတင်းထောက်တစ်ယောက် တို့ကို ပါဝင်ဘို့ရန် ဖိတ်ခေါ်လိုပါသည်။ ဤ အထူးအစီအစဉ်ကို 2015 မေလမှ 2016 ဇန်နဝါရီလ အထိ ပြုလုပ်သွားမည်ဆက်ဖတ်ရန်
နှစ်ပေါင်း (၃၀) လောက်ကတည်းက နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဇွန်လ (၂၁) ရက်နေ့ဆိုလျှင် ဂီတပွဲတော်ကြောင့် ပြင်သစ်ပြည် ၏ လမ်းများတွင် လူများနှင့်ပြည့်နှက်လျက်ရှိပါသည်။ နှစ်ကာလများ ကြာမြင့်လာသောအခါ ၄င်းကဲ့သို့ နွေရာသီ ကာလမျိုးတွင် ကျင်းပသော ဂီတပွဲတော်သည် နိုင်ငံတကာရှိ ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုကွန်ယက်များ၏ အားကောင်း မှုကြောင့် နိုင်ငံတကာ၌ ပိုမိုထင်ရှားကျော်ကြားလာပါသည်။ဆက်ဖတ်ရန်
နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနများအား လက်ခံကြိုဆိုရာဌာန သတင်းအချက်အလက်များကို အလွယ်တကူဖြန့်ဝေနိုင်ခြင်း
နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနများ ကြိုဆိုလက်ခံရာဌာန (Le Centre d’Accueil de la Presse Etrangere – CAPE)ကို ပြင်သစ်နိုင်ငံ ဥရောပသမဂ္ဂ၌ ဥက္ကဋ္ဌရာထူး ကို ရယူခဲ့သော အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် CAPE ဌာနသည် ပါရီမြို့၏ ထင်ရှားကျော်ကြားသော ရပ်ကွက်ရှိ Grand Palais အဆောက်အဦကြီးသို့ အောက်တိုဘာလ (၁)ရက်နေ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ၄င်းဌာနသည် နိုင်ငံတကာမှ သတင်းဌာနများအတွက် နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးနွယ်စု စသည့် မည်သည့် အရေးကိစ္စအမြင်များကိုမဆို အခက်အခဲမရှိ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောဆို ဆွေးနွေးနိုင်သော နေရာပင်ဖြစ်ပါ သည်။ဆက်ဖတ်ရန်